Xog:-Maxaad ka ogtahay Qaabkii uu u dhacay Qarixii Wadajir,? Bartilmaameedkuse ma Xarunta Degmadda ayuu ahaa – Hornafrik Media Network
Kooxda Alshabaab oo sheegatay Masuuliyadda Qarixii Maanta ayeey wararku sheegayaan in Bartilmaameedkoodu uusan ahayn Xarunta Degmadda Wadajir ee lagu qasbay in Gaariga halkaasi ay galiyaan.
Warar ay heshay Hornafrik ayaa sheegaya in Gaarigan oo ahaa Caasi uu qabtay Askari ka tirsan Ciidanka Deegaanka Xamar oo ka rabay Canshuur Maadaama uu Gaarigu rarnaa. Waxayna Goobjoogayaal ka ag dhawaa Barta lagu qabtay Gaariga sheegeen inay dood dhex martay Wadaha Gaariga iyo Askariga Minishiibiyadda ah, kadibna Askariga uu Qori ku qabtay Gaariga, kuna qasbay inuu ku leexdo Xarunta Degmadda Wadajir oo lagu Canshuuro Gaadiidka.
Gaariga oo uu waday Ismiidaamiyaha ayaa markii uu gudaha u galay Xarunta Degmadda Wadajir, iyadoo uu saaran yahay Askarigii soo qabtay waxaa mar qura dhacay Qarax noociisa aan Wadajir laga maqlin abid. Waxaana Dumay Xarunta Degmadda iyo goobihii ka ag dhawaa. iyadoona goobta ay iskula gubteen Askarigii soo qabtay Gaariga iyo Ismiidaamiyihii.
Ma jirto illaa iyo hadda goob rasmiya oo la og yahay oo uu Gaarigaasi ku wajahnaa, lkn waxaa la xaqiijiyay inuusan ku socon Gaarigan Xarunta Degmadda Wadajir oo ay ku qasbeen inuu halkaasi gallo Ciidanka Deegaanka Xamar oo ka rabay Canshuur.
Macluumaad hor dhac oo laga helay Sirdoonka Somalia waxa uu sheegayaa inuu baxsaday Gaari yar oo la socday gaariga qarxay oo ay saarnaayeen Rag Hubaysan oo loogu talagalay inay galaan Goobta uu Gaarigan ku qarxo. waxayse Raggan hubaysan oo arkayay in la qabtay Gaarigii isagoo aan gaarin bartilmaameedkiisii ay isaga laabteen Goobta markii uu gacan galay Gaariga, iyagoo dabeetana markii ay ku hubsadeen inuu Gudaha Xarunta Degmadda galay Gaarigu qarxiyay, maadaama ay hayeen Remote.
Wadaha Gaariga ayaa u muuqday inuu doonayay inuu iska bixiyo Canshuurta si uu u gaaro Bartilmaameedkiisa, isagoo dalbaday inuu waco Milkiilaha Gaariga si loogu soo diro Lacag, laakiin markii uu Taleefoonka la soo baxayba waxaa qarxay Gaariga, waxayna Khuburadda Miinooyinku aaminsan yihiin in Qaraxa meel kale laga hagayay oo la qarxiyay.
Gaariga ku qarxay Deg Wadajir